डाउनटाउन डचटाउन • डचटाउनस्टा.लि..org मा अर्बनमेन ईनिसिएटिभ
डाउनटाउन डचटाउनमा अर्बनमेन पहल
अर्बनमेन डाउनटाउन डचटाउनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय हितको बृद्धि गर्न पहल हो। कार्यक्रम बीचको साझेदारी हो DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, को डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, र मिसौरी मुख्य सडक जडान, र मिसौरीमा यो पहिलो प्रकारको हो।
अर्को केहि बर्षहरूमा, डीटी २, द सीआईडी, र MMSC डाउनटाउन डचटाउनमा जीवनशक्ति ल्याउने योजनाहरू विकास गर्नेछ, जुन सामान्यतया ग्रान्ड र ब्रडवेको बीचमामेरामेक स्ट्रिटको क्षेत्र मानिन्छ। योजना मिसुरी मेन स्ट्रीट को उपयोग गर्दछ चार बुँदा दृष्टिकोण: संगठन, आर्थिक जीवन, डिजाइन, र पदोन्नति। अर्बनमेन कार्यक्रमको साथ, शहरी समुदायहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पाँचौं पोइन्ट — सेफ, क्लीन र ग्रीन — थप गरिएको छ।
अनुमानित क्षेत्र जुन हामी डाउनटाउन डचटाउन मा कल गर्दछौं।
अर्बनमेन ईनिसिएटिभaद्वारा निर्देशित हुनेछ संचालन समिति डचटाउनको वर्तमान र भविष्यमा निहित चासोको साथ बासिन्दाहरू र पेशेवरहरू मिलेर बनेको छ, DT2 बोर्ड अफ निदेशक र MMSC सँगै काम गर्दै। आगामी महिना र बर्षहरूमा, हामी अतिरिक्त प्रतिक्रिया भेला गर्न र यस रोमाञ्चक कार्यक्रममा भाग लिन अवसरहरू प्रदान गर्न घटनाहरू र बैठकहरू होस्ट गर्नेछौं।
मुख्य सडक4+ १ पोइन्ट दृष्टिकोणबाट, डचटाउन संगठनले पाँच समिति गठन गरेको छ। कमिटीहरू — डिजाइन, आर्थिक जीवन, प्रमोशन, संगठन, र सेफ क्लीन एण्ड ग्रीन the डीटी २ र डचटाउन सीआईडी ​​बोर्डलाई रिपोर्ट गर्दछ। कमिटीहरू समुदायका सदस्यहरू मिलेर बनेको छ जसले डचटाउनलाई सबैका लागि उत्तम छिमेकको लागि मार्गनिर्देशन र कार्य सम्पादन गर्दछ। तपाईं समितिका बारे अधिक जान्न र साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/ कमिटीहरू.
डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक
शहरी मुख्य कार्यक्रमको भागको रूपमा, DT2 र डचटाउन सीआईडीले एक भाडामा लिएको छ डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक। ग्रोथ म्यानेजरले समुदायसँग संलग्न हुन र मिसौरी मेन स्ट्रिटको चार सूत्री दृष्टिकोण लागू गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं हाम्रो ग्रोथ म्यानेजर, जेसिका पायनेलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ jessica@dutchtownstl.org.
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जनवरी 17th, 2021 .
DutchtownSTL.org डाउनटाउन डचटाउनमा अर्बनमेन पहल